မယ်လိုဒီမောင်၏ ငြိမ်းချမ်းသံစဉ်: Networking နဲ့Programming....ဘယ်ဟာပိုလွယ်သလဲ????
သဉ္ဖာလည်း programming ပိုင်းဖက်ကို ပိုအားသန်ပါတယ်။ သဉ္ဖာ့အတွက်တော့ networking အပိုင်းက ပိုပြီး ဦးနှောက်ခြောက်ဖို့ ကောင်းပါတယ်။ challenging လည်း ပိုများတယ်လို့ ထင်တာဘဲ။ Final Year Project ကို networking နဲ့ ပါတ်သက်တာ လုပ်ပြီးကတည်းက တာ့တာ ပြလိုက်တာဘဲ။ networking ပိုင်းက ပို technical ဆန်ပြီး programming ပိုင်းက logic ပိုဆန်တယ်လို့ ကောက်ချက်ချရင် ရမယ်ထင်တယ်။ တစ်ခုခု error တက်လာရင် programmer တွေက debug လုပ်ရသလို network သမားတွေက troubleshoot လုပ်ရပါတယ်။ နှစ်ခုစလုံးကတော့ သူ့ထက်ငါ အပြိုင် challenging ဖြစ်တာဘဲ။ ဒါပေမယ့် အခု ကမ္ဘာ့ ဈေးကွက်မှာတော့ network သမားတွေရဲ့လစာ ပိုကောင်းပါတယ်။ senior programmer တစ်ယောက်ရဲ့လစာနဲ့ junior network analyst တစ်ယောက်ရဲ့လစာ ညီတူညီမျှ နီးနီးလောက်ကို ရှိပါတယ်။
Thanksalot for your valuable comment, sis.Nice to know we are on same board naw
ဘယ်ဘုတ်မှာရဲဟင်? ဒလဆိပ်ကမ်းမှာကပ်ထားတဲ့ မော်တော်ဘုတ်ရေးရား? :P
မလေးရှားနဲ့ စင်ကာပူ လှေဘယ်လိုအတူစီးလဲဟင် မမီ။ :P
မိန်းမနဲ့ ယောက်ျား ဘယ်သူသာလဲ မေးသလိုဖြစ်နေပြီ။ နားအေးပြီးရော မင်းတို့မိန်းမတွေပိုသာပါတယ်ကွာလို့ ဖြေရမလို ဖြစ်နေပြီ။